अन्तर्गत ब्रान्ड नाम "Prospan" औषधीको खोकी लागि एक श्रृंखला उत्पादन। विभिन्न औषधिको खुराक पक्षबाट रकम खकार thinning योगदान र bronchi को सिस्टम बाट हटाउन सुविधा। डिजाइन तयारी बच्चाहरु को लागि "Prospan"। समीक्षा आमाबाबुले दबाइ पक्षमा बोल्न। धेरै आमाहरू कारण यसको बोट-आधारित यो चिकित्सा चयन गर्नुहोस्। तयारीको रूपमा चिरहरिलता पात को एक निकाल्ने गरिन्छ। यसको नरम र एकै समयमा धन्यवाद mucolytic कार्य व्यक्त दबाइ चाँडै bronchopulmonary pathologies को अप्रिय लक्षण समाप्त। धेरै आमाबाबुले अनुसार अर्थ छोराछोरीलाई राम्रो सहन छ, र साइड इफेक्ट अत्यन्तै दुर्लभ छन्। यो ट्याब्लेटको (effervescent) inhalation लागि थोपाहरूद्वारा, सिरप को रूप मा उत्पादन हो।
दबाइ ब्रोन्कियल बाधा सिंड्रोम, पुरानो वा तीव्र ब्रोंकाइटिस लागि सिफारिस गरिएको छ। दबाइ जसमा जानकारी अनुसार "Prospan" निर्देशन बच्चाहरु को लागि भडकाऊ प्रक्रिया र कठिन expectoration संग खोकी को जटिलताहरू द्वारा सुनेपछि श्वसन प्रणाली मा pathologies को उपचार, एक ठूलो सहायक छ हो। यो ब्रोन्कियल अस्थमा लागि चिकित्सा लिएर सिफारिस गरिएको।
साधन फ्रैक्टोज को एक भाग comprises। यस दबाइ संग जडान यसको घृणाको साथ विरामीहरु लागि सिफारिस गरिएको छैन। Contraindications पनि अन्य कुनै पनि घटक गर्न अतिसंवेदनशीलता समावेश गर्नुहोस्। inhalation, सिरप लागि खस्छ र ट्याब्लेटको कुनै उमेर प्रतिबन्ध हो। तर, चिकित्सा एक चिकित्सक द्वारा निरीक्षण गर्नुपर्छ। सावधान दबाइ प्रशासन जब जब TBI, कलेजो र मस्तिष्क pathologies अवलोकन गर्न।
Dosing अर्थ "Prospan"। निर्देशन
माथि3वर्ष छोराछोरीलाई लागि, इष्टतम खुराक inhalation 10 टोपी मानिन्छ लागि खस्छ। 3-5 पटक एक दिन,4देखि7वर्ष - 15 घटेको,7साल - प्रति दिन 20 घटेको। को सिरप मादक पदार्थ सेवन गर्नुपर्छ भोजन अघि। साना विरामीहरु लागि पानी एउटा सानो रकम एक पतला समाधान लिन दिनुभयो। सिरप "Prospan" प्रति दिन 7.5 एमएल - 15 एमएल र अप6वर्ष:614 वर्ष बच्चाहरुका लागि निर्देशन उद्देश्य प्रदान गर्दछ। दबाइ को मात्रा तीन भाग विभाजन गरिएको छ। Effervescent ट्याब्लेटको पानी एक गिलास मा भंग। एक दिन दुई पटक ट्याब्लेट मा - विरामीहरु 12 साल सम्म 1/2 ट्याब्लेट द्वारा एक दिन तीन पटक सिफारिस, 12 वर्ष पुरानो देखि। दबाइ को अवधि को विकृति खुलारूपमा अनुसार स्थापित छ। सामान्यतया, यो चिकित्सकीय पाठ्यक्रम एक हप्ताको कम्तिमा रहन्छ।
तयारीको "Prospan" (बच्चाहरु को लागि) बारेमा थप जानकारीको लागि। मूल्य लागूपदार्थ
लागत एजेन्ट 170 220 rubles हो। दबाइ यसको उच्च दक्षता मा अपेक्षाकृत किफायती हुन मानिन्छ। यो वास्तवमा दबाइ अर्को फाइदा धेरै अरूलाई तुलना गरिएको छ। "Prospan" निर्देशन को एक माध्यम समावेश जो जानकारी, द्वारा प्रमाणित, छोराछोरीलाई लागि यो चिकित्सा को safest को छ। अक्सर, दबाइ bronchopulmonary लागि मात्र उपचार साना विरामीहरु pathologies छ। तथापि, विशेषज्ञहरु अपेक्षाकृत किफायती र अत्यधिक प्रभावकारी माध्यम भए तापनि स्वागत अघि चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्नुपर्छ, कि हामीलाई सम्झाउने।
"Cefixime" (निलम्बन): बच्चाहरु, वर्णन, संरचना र समीक्षा लागि निर्देशन
गलत गल्ती गर्नबाट बच्नको लागि बच्चालाई कसरी छनौट गर्ने?
हरर के छ, वा के "Maynkraft" गर्छ?
फिटा पनीरको साथ नाजुक भेडा। व्यञ्जनहरू
Amaretto liqueur - इटाली को मोती
पात्रो को प्रकार: प्राचीन आधुनिक र विशेष
लगानीको लागि अनुक्रमणिका कोष